Isithembu asakhiwa yinkanuko kepha sakha imindeni
UMNUZ Nkanyiso Khomo owayefuna ukuthatha inkosikazi yesibili, uPhumla Zondi ,akaphumelelanga ngesikhathi esecela umkakhe uNkk Bonisiwe MaZuma Khomo ohlelweni iMnakwethu, oludlala kuMzansi Magic, Lolu hlelo lukhombisa amadoda anesifiso sokuthatha inkosikazi yesibili kanti lusungulwe uMusa Mseleku woThando neSithembu.
PHILI MJOLI | February 4, 2020
INDODA ayiceli kumkayo uma isifuna ukuganwa isithembu kodwa bayabonisana ngaso.
Lokhu kushiwo uMnuz Madoda Zungu oyisazi kwezamasiko ephawula ngombono womlingisi u-Ayanda Borotho obethi isithembu yinto ecindezela abesifazane futhi nendlela esasenziwa ngayo endulo isishintshile. Ngeledlule kusabalale amavideo ka-Ayanda lapho ebekhuluma khona ngesithembu echaza ukuthi umsuka waso.
U-Ayanda uthe umsuka kwakungukwakha umndeni njengoba kwakuthi unkosikazi uma ebona ukuthi kukhona lapho angasafinyeleli khona ekwakheni umndeni ebese eyofunela umyeni wakhe omunye unkosikazi wesibili, ukuze balekelelane.
UZungu uthe isithembu saqalwa ngenxa yezizathu ezintathu:
Esokuqala kwakungesokuthi unkosikazi akabatholi abantwana bese yena ecela indoda ukuthi ithathe unkosikazi wesibili ;
Kwesinye isikhathi uthe kwakuba wumndeni ngoba unkosikazi engabatholi abantwana noma egula, bese kuba yiwo othatha isinqumo sokuthi kuthathwe unkosikazi wesibili;
Kwesinye isikhathi uthe kwakuba yiyona indoda esifunayo ngesizathu ezifanayo noma kube ngesokuthi izingane enazo nonkosikazi ngezamantombazane.
Kwakwaziwa ukuthi amantombazane azogana futhi ngeke akwazi ukuqhuba isibongo.
“Phambilini uma unkosikazi engabatholi abantwana bekuthiwa inkinga ikuye ngaphandle kokuthi kube khona ohloliwe, yingakho naye ebesukuma. Uma kube yiyo indoda eqhamuke nalo mbono kumele ibonisane nonkosikazi wayo ibeke izizathu ezenza ukuthi ithi ifuna isithembu. Isizathu bekuba esokwakha umndeni hhayi esenkanuko. Bebonisana okungenzeka ukuthi ngesikhathi bebonisana unkosikazi aqhamuke namaphuzu enza ukuthi kucace ukuthi asikho isidingo sesithembu,” kuchaza uZungu.
Uqhube wathi: “Muva nje uthi amadoda ayesaba ukuphumela obala ngokuthi afuna isithembu bese eqamba amanga amanye athi owesifazane ongashadile akayi ezulwini. Amanye aze azenze sengathi aphupha abadala bethi awathathe isithembu, akhulume elele kanti asenza indlela yokuthi amakhosikazi angenqabi. Angazi noma ucwaningo oluthi amadoda mancane kunabesifazane lona luyiqiniso yini, noma kwakuseyiwo abebhala esaqhubeka nokuthi afake ingcindezi kubantu besifazane,” kuqhuba yena.
Uthe amanye amadoda athatha isithembu ngoba ebona amakhosikazi awo enezinto angazithandi azenzayo bese ezilungisa ngesithembu, konke lokho akusona isizathu esasuselwa kuso isithembu.
UNkk Nomagugu Ngobese uvumelene no-Ayanda wathi isithembu sasenziwa ngumuntu wesifazane, akhethe itshitshi noma intombi ayibona ifanele umyeni wakhe.
“Njengamanje amadoda aseyazishelela abantu besifazane afuna beze esithenjini kuze kuthiwe indoda iyisoka. Isoka yinsizwa hhayi umnumzane. Lesi sithembu esiqhutshwa yinkanuko siqhutshwa nayibo abesifazane abangakusabi ukupepenyeka namadoda ashadile ngethemba lokuthi azobenza amakhosikazi. Yingakho isithembu samanje sigcwele inzondo nokuxabana ngoba sakhelwe phezu kwamanga. Nabo abesifazane ngibuye ngibagxeke, ngokuvumela amadoda anenkanuko baze babe nesibindi sokungena emzini womunye umfazi bethi baqomile. Uqonywa kanjani umnumzane? Uma kungekhona lokho kuqhamuka izingane ezizalwe ngaphandle zilethwe kunkosikazi, lezo zingane ezabanye abantu besifazane abahlukumeza lo nkosikazi. Kulokhu kuthiwa abesifazane baningi kunamadoda, ngubani obala abesifazane bese ephuma nalezi zibalo?” kubuza uNkk Ngobese.
UMnuz Sazi Mhlongo oyisazi kwezamasiko obuye abe yiphini likamengameli wezinyanga KwaZulu-Natal, uthe isithembu sasenziwa ngabesifazane ababekholwa kodwa lokho bengakukhombisi ngokuya emasontweni noma ngokugqoka.
“Ngokuhamba kwesikhathi kwashintsha kwaba yinto eyenziwa ngamadoda athi umfazi uma edelela athathe omunye lokho-ke akusona isithembu ingxoviya ngoba kuxova abantu,” kusho uMhlongo